DVB TV – “ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဘယ်လောက် အရေးပါလဲ”
393 April 10, 2017
DVB TV – “ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဘယ်လောက် အရေးပါလဲ” “အခု ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲဆီ တလှမ်းချင်းလှမ်းမယ့် ၄ နှစ်တာ ခံစစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်. ဒီကနေမှ ၂၀၂၀ ဆီ ဆက်ချီတက်မယ်” ဒေါက်တာ အေးမောင် – အနိုင်ရပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်၊ အမ်းမဲဆန္ဒနယ် “ကျနော်တို့မဲဆန္ဒနယ်မှာ အရင် ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်း မဲပေးသူက ၄၀ ရာနှုန်းလောက်ပဲရှိတယ် အခုလည်း ၃၈ ရာနှုန်းပေါ့နော် ဒေသခံမဲဆန္ဒရှင်အတော်များများက ဒေသမှာမရှိကြတော့ဘူး နိုင်ငံရပ်ခြားထွက် အလုပ်လုပ်နေကြရတယ်” ဦးအောင်ကြည်သိန်း – အနိုင်ရပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်၊ ချောင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ် “မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ မဲပေးနှုန်းကျဆင်းတာဟာ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာပါ” စိုင်းရဲကျော်စွာမြင့် – အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ၊ ယုံကြည်ရသောရွေးကောက်ပွဲများပေါ်ပေါက်ရေး ပြည်သူများ ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ “ပါတီရှုံးရခြင်းသည် ရှမ်းစာမတတ်လို့သာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတာမျိုးကတော့ သိပ်မဟုတ်ပါဘူး. ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ …Read more »
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေး ပုဂ္ဂလိကကို လွှဲပြောင်းသင့်လား ?
1225 March 23, 2017
DVB BizDebate – လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေး ပုဂ္ဂလိကကို လွှဲပြောင်းသင့်လား ? “မူဝါဒလို့ပြောတဲ့နေရာမှာ အခြားနိုင်ငံတွေမှာအောင်မြင်နေ တဲ့မူဝါဒများ စွာထဲက ကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မူဝါဒတွေရှိပါတယ်။ အရေးကြီး ဆုံးကတော့ ဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုထဲက သူဘဲ မူဝါဒကိုချမှတ်တယ်။သူဘဲ အကောင်အထည်ဖော်တယ်။ဘတ်ဂျက်တွေကိုလဲ သူဘဲသုံးစွဲသွား တယ်။ပြီးတော့ မကိုက်ဘူးဆိုပြီးပြောတာက အမှန်တကယ်တော့ နှစ်ပေါင်းများစွာကျန်ခဲ့ပါပြီ။ဒါကိုဆက်ပြီးသွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မူဝါဒက ကျွန်တော်ထင်တယ် ဒါကသေချာပေါက်ပြောင်းရမယ့် မူဝါဒပါ” – ဦးမြင့်ဇော် (ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံလျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း) “တချို့လျှပ်စစ်ဈေး အရမ်းချိုသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ နူးကလီးယား သုံးကြ တယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ ဒီနူးကလီးယားက အန္တရာယ်အရမ်း ကြီးပါ တယ်” – ဦးရွန်းစိုဦး “လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လျှော့မတွက်ပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကို လျှပ်စစ်ကဦးဆောင်ပြီး ဆွဲတင်သွားနိုင်သလို စီးပွားရေးကို စုတ်ပြတ် သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတခုလဲဖြစ်ပါတယ်” – ဦးညီညီလွင် “သဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ …Read more »
DVB TV – “လူကုန်ကူးမှုက မြန်မာ့စီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုရိုက်ခတ်သလဲ ?”
408 March 19, 2017
DVB TV – “လူကုန်ကူးမှုက မြန်မာ့စီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုရိုက်ခတ်သလဲ ?” “အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်း ရှားပါးတာရယ်၊ နောက်လုပ်ခလစာ နည်းပါးတာရယ်ကြောင့်အခြားတိုင်းပြည်မှာ သွားပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်။ ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် မိုးစပါးရိုတ်သိမ်းတဲ့အချိန်၊ ဆောင်းသီးနှံ ရိုတ်သိမ်းတဲ့ အချိန်တွေဆိုရင် လုပ်သားရှားပါး မှုပြသနာကို ကျွန်တော်တို့ တော်တော် ရင်ဆိုင်ရတယ်။ နှစ်တိုင်း တွေ့ကြုံ နေရတဲ့ပြသနာပါ။ ဒီတော့ ကုန်ထုတ် လုပ်မှုစားရိတ်တွေ မြှင့်သွားခဲ့ရတယ်။ နောက်ဆုံး စားသုံးသူဘဲ ပြန်ခံစားရ တာပေါ့လေ။ ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေ ချင်တာက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း က ကျေးလက် လူဦးရေဖြစ်တာကြောင့် ဒီလယ်ယာစီးပွားကဏ္ဍကို ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်အောင် ဆာင်ရွက်ပေးစေ လိုပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အစိုးရအနေနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ လယ်ယာ ကဏ္ဍနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ထိထိရောက်ရောက်လုပ်တာမရှိသေးသလို လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရမှာလည်း …Read more »
DVB TV – “အနာဂတ်တပ်မတော်ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ?”
1372 March 19, 2017
DVB TV – “အနာဂတ်တပ်မတော်ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ?” “တပ်ဘက်က DDR/SSR နားလည်ပုံနဲ့ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က DDR/SSR နားလည်ပုံမတူဘူး ဟနေတယ်” ဆလိုင်းထက်နီ – ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး “ငြိမ်းချမ်းရေးရယ် ဒုတိယတချက်က နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရယ် ဒီ ၂ ခုမရှိဘဲ တပ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ မရပါဘူး” ဦးမျိုးသန့်ခိုင် – အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ၊ သေနင်္ဂအင်စတီကျူ့(အမျိုးသားလုံခြုံရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့) “လွှတ်တော်ဆုံးဖြတ်ချက် လက်အောက်မှာနေရမယ့် တပ်မတော်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ လက်တွေ့နဲ့ နီးစပ်ရဲ့လား ကျနော်ကမေးချင်တယ်. ပြည်တွင်းစစ်မီးဟုန်းဟုန်းတောက်ဆုံးအချိန်က ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ မဟုတ်ဘူးလား? တပ်ကို အရပ်သားအစိုးရအောက် သြဇာခံထားခြင်းက တိုင်းပြည်ပိုဒုက္ခရောက်တယ်။” ဦးအေးနေ၀င်း – ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းမြေး “ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်က အခြေအနေက မကောင်းဘူးလေ. ၁၉၄၇ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုက ပုံစံမကျတဲ့ ပြည်ထောင်စုပုံစံဖြစ်ခဲ့လို့ တိုင်းရင်းသားတွေက …Read more »
DVB TV – “တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ညီညွတ်ရေး ဘယ်လို တည်ဆောက်ကြမလဲ”
1091 March 12, 2017
DVB TV – “တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ညီညွတ်ရေး ဘယ်လို တည်ဆောက်ကြမလဲ” “တကယ်ပဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ မျိုးရှိနေသေးရဲ့လားဆိုတဲ့ အချက်ရှိတယ် အခု တကယ်ပဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ မျိုး မရှိပါဘူး ဒါက တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်က သတ်မှတ်ခဲ့တာ” ခွန်မောင်သောင်း – ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ “ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ ၅ ခုရှိတယ် အဲ့အတွက် ကျမတို့ကလည်း ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ သူတို့ ရပိုင်ခွင့်ကို မပေးပါနဲ့လို့လည်း ပြောခွင့်မရှိပါဘူး။ သို့သော် ပြည်နယ်တွေ ခွဲတောင်းနေမယ့် အစား ချစ်ချစ် ခင်ခင် နေသွားရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ ကျမတို့ ရှမ်းတွေ လူမျိုးမခွဲပါဘူး” နန်းခင်ထားရီ – ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ …Read more »
DVB TV – “အပြောင်းအလဲမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းတွက ဘယ်လောက် အရေးပါလဲ”
925 March 5, 2017
DVB TV – “အပြောင်းအလဲမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းတွက ဘယ်လောက် အရေးပါလဲ” “လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင် လွှတ်တော်တွေမှာ တံခါးပိတ်အစည်းအဝေးတွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့ အစည်းအဝေးခန်းထဲက ကွန်ပျူတာတွေတွေ ဘယ်သူဆင်တာလဲ နက်ခ်ဝေါ့တွေရော ဘယ်သူဆင်လဲ တံခါးပိတ်အစည်းအဝေးတွေက သတင်းတွေပေါက်နေတာက နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကို သေချာ မသုံးနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ပေါ့” ဦးမိုက်ကယ်စွန်သ – ဒစ်ဂျယ်တယ်/ဆိုင်ဘာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင် “အစိုးရကနေ ထုတ်ပြန်ပြီး ကျနော်တို့ ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ အချက်အလက်တွေ မရှိဘူး. ကိုးကားမှုပြန်ယူလို့ရတဲ့ အခြေအနေရှိမှသာ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းတွေက အရွေ့မှာ ပါနိုင်မယ်။ အခုက အိုင်တီသမားတွေက analysis လုပ်ဖို့ ဒေတာပြန်ကောက်ဖို့ လုပ်လို့ မရဘူး” ဦးစိုးသီဟနောင် – အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၊ ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားရီပို့ အပလီကေးရှင်း “နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးနိုင်တဲ့ အသိပညာ အတတ်ပညာတွေ လိုသေးတယ်” …Read more »
DVB TV – “ပြည်ပပို့ကုန်ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ?”
809 March 4, 2017
DVB TV – “ပြည်ပပို့ကုန်ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ?” “ရေထွက်ပို့ကုန်တွေ ဥရောပဈေးကွက်ကိုသွားဖို့ ဆိုရင် နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်တွေလိုပါတယ်။ ထောက်ခံချက်ရရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ ဆိပ်ကမ်းကနေထွက်တဲ့အချိန်ကစပြီး လှေပေါ်မှာပါတဲ့လှေလုပ်သားတွေပါ လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အဝရရဲ့လား စတဲ့စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေ အများကြီးလိုပါတယ်” “ရေလုပ်ငန်းက သဘာဝကနေ ဖမ်းဆီးတာဖြစ်လို့ နည်းစနစ်တကျနဲ့ ဖမ်းဆီးဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပို့ကုန်လိုငွေပြ လို့ လှေအစီးရေအများကြီးနဲ့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ နောင်သားစဉ်မြေးဆက်အတွက် စဉ်းစားရ ပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုး မဖြစ်ဖို့လိုတယ်” ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း (အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Myanmar Fisheries International Joint venture Co., ltd) “ဈေးကွက်ရှာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘဏ်စနစ်တွေက အများကြီးလိုပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်တွေမှာ ငွေလိုလို့ချေး မယ်ဆိုရင် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကို အပေါင်ထားပြီး ချေးတာမျိုးနဲ့ လည်ပတ်နေရတာပါ။ နိုင်ငံတကာဘဏ်တွေ မှာတော့ တကယ်အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ …Read more »
DVB TV – ‘ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿ နာ ဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲ?’
1448 February 26, 2017
DVB TV – ‘ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿ နာ ဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲ?’ “ဖြစ်သွားတဲ့ ပြဿနာတွေမှာ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေက အဓိကကျတယ်။ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေနဲ့အညီ ဖြေရှင်းရင် ပထမ အဆင်ပြေသွားမယ် အဲဒီအဆင့်ကို မဖြေရှင်းနိုင်ရင် ပြေလည်ဖို့က ခက်နေဦးမယ်” ဒေါ်အေးနုစိန် – ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ “ကျနော်တို့က အကြံပေးကော်မရှင်ပါ ကျနော်တို့ ဘာအကြံမှ မပေးရသေးဘူး ဒီကော်မရှင်ဟာ မကောင်းဘူး ပြောနေတော့ ဘာရလဒ်ကိုကြည့်ပြီးပြောလဲ ကျနော်မသိဘူး” ဟာဂျီဦးအေးလွင် – ရခိုင်ပြည်နယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် “လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်က ပြောရရင် လူသားတိုင်းဟာ နိုင်ငံမဲ့တော့မဖြစ်ရဘူး” ဦးယုလွင်အောင် – မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် “မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနဲ့ အခြားသောပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ ဒေသတွေက တိုင်းရင်းသား ညီအကိုတွေအတွက်က သူတို့အခွင့်အရေးတွေ သိဖို့ သူတို့ပြောဆိုသုံးနှုန်းတဲ့ ဘာသာစကားတွေနဲ့ ရှင်းပြမှ …Read more »
DVB TV – “ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဒဏ်ကို ပြည်သူတွေဘယ်လောက်အထိ ခံစားနေရလဲ?”
1496 February 23, 2017
DVB TV – “ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဒဏ်ကို ပြည်သူတွေဘယ်လောက်အထိ ခံစားနေရလဲ?” “ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို မကျအောင်ဆက်ပြီးတော့ မထိန်းနိုင်ဘူး ပြီးတော့ ဆက်တက်သွားမယ် ဆိုရင်တော့ စိုးရိမ်ရေမှတ်ကို ရောက်သွားနိုင်ပါတယ် ” ဦးစိုးသိန်း (ဒုညွှန်ချုပ် ငြိမ်း)၊ စီမံကိန်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန “ ဒေါ်လာဈေး အတက် အကျ ကို ထိန်းဖို့ဆိုတာက ကိုယ့်မှာ ထိန်းနိုင်တဲ့အင်အား ရှိလား မရှိလား ဆိုတာကို အရင်ဆုံး ဆန်းစစ်ကြည့်ရမယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မှာ နိုင်ငံခြားအရံငွေကြေး က အရမ်းနည်းနေပါတယ်” ဦးစံသိန်း (ဘဏ်လုပ်ငန်းပညာရှင်) “ လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့သဘောကတော့ ဒေါ်လာဈေးတက်လို့ရှိရင် တက်ပြီးတော့မှဘဲ ရောင်းကြတယ် နောက်ဆုံးတော့ စားသုံးတဲ့ပြည်သူတွေဘဲ ထိတာပေါ့’’ ဒေါက်တာစိုးထွန်း (ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာမော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအသင်း) “သီအိုရီအရကတော့ ပို့ကုန်တိုးမြှင့်ရမယ် …Read more »